Sunday March 17, 2019 - 20:58:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in isbedel dhanka maamulka ah uu ka dhacay wadada xeebta ah ee Xiriirisa Muqdisho iyo Marka.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa caawa maqribkii dib ula wareegay gacan ku heynta deegaanka istiraatiijiga ah ee Dhanaane oo bilihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamadu ay baneeyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaanka Dhanaane waxayna ufirxadeen dhanka degmada Dharkeynleey ee magaalada Muqdisho.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay soo wajahday cabsi ah in uu weerar uga yimaada Xarakada Al-Shabaab islamarkaana uu ku adkaado in ay gurmad helaan.
Inta badan taliyaashii hogaaminayay ciidamadan ayaa ku baxay gacanta Xarakada Al-Shabaab kadib markii lagu beegsaday wadada xiriirisa Dhanaane iyo Muqdisho, ciidamadan isaga baxay Dhanaane ayaa katirsanaa guutada 12-ka Apriil dhammaan taliyayaashii guutadadaas ayaa lagu dilay wadada xeebta ah waxaana kamid ahaa Jeneraal Cumar dheere iyo laba Jeneraal oo kale.
Dowladda Federalka ayaa horey u dheegtay in ay nafaf badan u hurtay difaacashada Dhanaane balse kuma guuleysan in dowladdu ay difaacato deegaankan, weeraro dhabbagal ah iyo qaraxyo aan kala joogsi laheyn ayay lakulmayeen gaadiidka sahayda udaabuli jiray ciidamadii ku sugnaa deegaanka Dhanaane.
Isku daygii ay maleeshiyaadka dowlada ku difaacan lahaayeen wadada xeebta ah ee Xiriirisa Muqdisho iyo Marka waxaa ku gacan siinayay ciidamada Mareykanka oo dhanka cirka ka taageerayay waxaana muuqata in dhammaan isku dayadaasi ay noqdeen hal bacaad lagu lisay.
Dhanka magaalada Marka maleeshiyaadka dowladda Federaalka ayaa ku wajahaya xaalad aad u adag kadib markii ciidamada Al Shabaab ay ka jareen dhammaan waddooyinka soo gala waxayna maleeshiyaadkaasi si gaabis ah ku helaan sahay aan badneyn oo doomo loogu keeno marmarka qaarna ciidamada AMISOM ayaa siiya wax xoogaa raashin ah.